Sintomy EGV Fitaovam-piadiana ambanin'ny tany MSFS 2020 - Freeware
Enhanced Ground Vehicles dia mikendry ny fanatsarana ny firafitry ny fiara rehetra ao anaty seranana MSFS 2020. Ahitana atiny miisa Eoropeana / alemana miisa 30, izay miorina amin'ny fiara tena izy. Ny firafitra sasany dia noforonina avy hatrany am-boalohany, ny sasany kosa tsy manana antsipiriany kely fotsiny nampiana toy ny logo sy famantarana ny fampiasana. Ny fanapahan-kevitry ny firafitra dia tsy nisy fiantraikany, noho izany dia tsy tokony hisy fiantraikany eo amin'ny fampisehoana. Misaotra an'i JBF23 nanome alalana hampakatra ao amin'ny Rikoooo.
Ny fiara tsirairay dia miaraka amina fonosana modiny manokana, amin'izay azonao atao ny mifidy izay atiny tianao hapetraka ao amin'ilay auto-installer Tsy mila misafidy eo amin'ny Firetruck01 sy Firetruck 02 ohatra ianao ary afaka mampiasa roa miaraka.
Ity misy topy maso feno momba ny atiny hahafantarana ny anaran'ireo fonosana tianao hapetraka:
Afaka manao fanomezana ho an'ny JBF23 ianao amin'ny BuyMeaCaffee
Noforonina 29 Mar 2021
Nohavaozina taminy 29 Mar 2021
JBF23 no nanao an'io mody io. Misaotra manokana an'i Porter2411, vLegion ary TehGodlyLuzer